RASMI: Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(London) 12 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska ayaa heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda da’da yar.
Arsenal ayaa da’yarkeeda Joe Willock waxa ay ka saxiixatay heshiis cusub oo waqti dheer uu kula sii joogi doono kooxda.
20-sano jirkaan khadka dhexe kaasoo xiriir la lahaa Gunners tan iyo markii uu afar sano jirsaday, waxa uu ka soo gudbay dhanka dhallinyarada iyo akadeemiga ka hor inta uusan kulankiisii ugu horeysay ee waa weyn kooxda u safan bishii Sebtember ee sanadkii 2017, waxaana uu ilaa iyo markaas u ciyaaray 19 kulan oo dheeri ah.
Xilli ciyaareedkan, Willock wuxuu ku soo bilaabay safka hore ee Arsenal saddexdii kulan ee ugu horreeyay Premier League, waxaana laga wacay xulkiisa England ee da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada.
Lama shaacin inta uu gaarsiisan yahay heshiiska uu saxiixay Willock, balse kooxdiisa Gunners waxa ay Twitter-keeda ku shaacisay in ciyaaryahanku uu qalinka ugu duugay qandaraas waqti dheer ah.
Markii uu Willock heshiiskan cusub qalinka ku duugay tababaraha Arsenal ee Unai Emery ayaa u sheegay Website-ka rasmiga ah ee kooxda: “Joe waxa uu sameeyey horumar badan sanadkii la soo dhaafay.”
“Farsamo ahaan waa mid xoog leh, wuxuuna muujiyay kalsoonida uu ku qabo masuuliyadda, waxaan rajeynayaa inaan la shaqeeyo isaga, si aan uga caawiyo in uu horumaro oo uu awooddiisa wax waliba ugu fuliyo.”